Podere Costantino-IiFlethi kwiVilla-Kufuphi nePisa - I-Airbnb
Podere Costantino-IiFlethi kwiVilla-Kufuphi nePisa
Izindlu ezine ezithandekayo (igumbi eli-1 kunye ne-2 lokulala) kwiFama yaseVilla kwiNdawo enomtsalane yaseZulwini isonwabela umbono omangalisayo weenduli zePisa. Amagumbi abekwe kwindawo entle kakhulu emhlabeni kunye nomgangatho wokuqala kunye nedama lokuqubha elihle eli-12x6m.
Amagumbi amane athandekayo anephuli ebukekayo kwi-Villa-Farmhouse entle ebonwabela umbono omangalisayo weenduli zePisa. I-Podere Costantino ibekwe kumbindi weTuscany, i-30min kude neSikhululo seenqwelomoya sasePisa, inika ufikelelo kwezona ndawo zintle zinokunikezela: ubuhle bendalo, ubuncwane obunqabileyo bobugcisa bezixeko ezinjengePisa, iVolterra kunye neSan Gimignano (30km), iFlorence. , Siena, Lucca (45km) kunye ne-40km kuphela ukusuka kunxweme lolwandle.
I-Podere Costantino ibekwe encotsheni yenduli encinci ethambileyo kufutshane nelali encinci yaseMorrona (i-190 m. Ngaphezu komphakamo wolwandle), idolophu yakudala yase-Etruscan.
I-Podere Costantino inokukubamba kwelinye lamagumbi ayo amane atofotofo kunye nokuphumla: iAlba, iTramonto, iMeriggio kunye neAurora. Amafulethi abanzi, abanzi kwaye aqhakazile anika yonke intuthuzelo efunekayo: inkqubo yokufudumala yokuzimela, i-wireless, i-oven yekhitshi emhlophe, i-barbecue, i-TV yesathelayithi kunye nazo zonke iindlela eziqhelekileyo zaseTaliyane kunye nendawo yokupaka yangasese. Ifulethi ngalinye lithe ngqo kwigadi yabucala enetafile kunye nezitulo ezivumela ukutya kunye nokuphumla kwaye igumbi ngalinye linegazebo yabucala ejonge echibini.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$161